Malunga nathi - u-Handan Yanzhao Fastener uMenzi weeMveliso Co., Ltd.
IHandan Yanzhao Fastener yokuThengisa iMveliso Co., Ltd.
I-Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co, Ltd ngumenzi ophambili wezinto zokubopha, ezinembali yemveliso kunye nokugqwesa kwenkonzo ukusukela ngo-1981 Iinkqubo zethu zoLawulo loMgangatho zi-ISO 9001: 2015 ISO14001: 2015 kunye ne-OHSAS18001: 2007 eqinisekisiweyo. Ngokuzibophelela ukugqibezela ukoneliseka kwabathengi ngokunika uluhlu olubanzi lweemveliso kunye neenkonzo ezingaphakathi endlwini, u-Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co, Ltd ngokuziqhenya ube ngumnikezeli omkhulu wokuvala kubandakanya: icandelo lezokwakha, ulwakhiwo lwendlela, ishishini lezemigodi, imveliso yoomatshini, ukwenza izinto njl.
I-Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd, eyinkampani ye-R & D yobungcali kunye nokuveliswa kweebholithi, iinuts, i-washer, i-screws, izikhonkwane zentloko ezimbini, ii-Anchor bolts kunye nentonga yentambo njl.Gxila kwi-DIN, ASMI, BSW, JIS, GB .
I-Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd inamalungelo ayo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle agunyaziswe ngurhulumente wePRC. Isatifikethi soMgangatho oMninzi wephondo le-Hebei, i-Handan eyaziwayo yoRhwebo, kunye nephondo le-Hebei kwishishini elisekwe kwitekhnoloji esezantsi naphakathi, Inkampani iyakhokela kolu shishino, ikwanazo neeNgxelo zoVavanyo lweZinto, ukuvavanywa kweMveliso kuyaxhaswa nako.
Umzi-mveliso wethu unezixhobo eziphambili ekhaya, amagcisa aphezulu kunye neemveliso ezingqongqo zokuqinisekisa umgangatho; isebenzisa enye imveliso -stop indlela yokulawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso, ukuze isikali seemveliso zentengiso sandiswe ngokuqhubekekayo, kwaye umfanekiso wentlalontle uphuculwe ngokukhawuleza iimveliso zethu ziye zazuza igama eliphezulu phakathi kwabathengi.
Enkosi ngeshishini lakho. Siyalixabisa ithuba lokukukhonza.
Iibholiti, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, I-Hexagon Socket Head Bolts, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane,